အသက် ၂၅ - ED & နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းသွားသည်။ Porn နှင့်ပတ်သက်သော fetish များနီးကပ်လာပြီဖြစ်သော Your Brain On Porn
အသက် ၂၅ - ED & နှောင့်နှေးနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မှုပျောက်ကင်းသွားသည်။ Porn နှင့်ပတ်သက်သော fetish နီးပါးသွားပြီ
ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လက Peen အား၎င်း၏ကြာမြင့်စွာဆုံးရှုံးခဲ့ရသောဘုန်းအသရေသို့ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်စုစုပေါင်းဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းသွားသကဲ့သို့ခံစားမှုကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်၊ ပြန်လည်နာလန်ထူရန်ရှည်လျားသောလမ်းအကြောင်းလေ့လာရန်အတွက်ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်သည်။
ငါ၏အဇာတ်လမ်းအတွက်ဗဟိုဆောင်ပုဒ်အဝေးမှာနထေိုငျသောမိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့ငါ့ကြားဆက်ဆံရေးသည်, ထို့ကြောင့်သာတိုင်းလအနည်းငယ်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံရန်နိုင်ပါတယ်။ သူသည်ငါ့အဟောင်းအလေ့အထများနှင့် fapping ငါ၏လက်ရှိငြင်းပယ်ခံရအကြောင်းကိုသိတယ်, နှင့်တဆင့်နဲ့တဆင့်ထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာယခုတစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအမျိုးမျိုးသောအဆင့်ဆင့်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြရသည်။ တစ်လနဲ့ငါ (ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီ) တစ်ဝက်အကြာမှာငါဟာကျောက်တုံးခိုင်မာပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစိုက်ထူမှုကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီး၊ ငါ့ရဲ့အော်ဂဇင်များကအဆက်ပြတ်နေသော်လည်းငါဟာအထွတ်အထိပ်မရောက်ခင်နောက်ဆုံးအချိန်တွေမှာငါ့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်အဟောင်းတွေကိုသုံးခဲ့ရသေးတယ်။ အဘယ်ကြောင့်? ငါမသိဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်း boner ဆုံးရှုံး၏ကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲက။ ဒီတစ်ခါလည်းဟောင်းနွမ်းအလေ့အထများခက်ခဲသေသောကြောင့်,
ပြီးခဲ့သည့်ဆောင်းရာသီမှရှေ့ဆက်အစာရှောင်။ ငါနောက်တဖန်သူမ၏တွေ့မြင် သူမသည်သူမအတွင်းသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ခဲ့သော်လည်းတစ်ကြိမ်သာ (သူမဘီစီတွင်မရှိခဲ့ပါ၊ ကွန်ဒုံးများသည်အလုပ်မလုပ်သောကြောင့်လွန်ခဲ့သောနွေရာသီကမလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့) ။ ထို့နောက်တွင်ယောနိသည်အလွန်ချောင်ချောင်နေပြီးမလှုပ်ရှားနိုင်တော့သောခံစားချက်ရှိခဲ့သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံခံစားမှုအကြောင်းကိုပင်မဟုတ်ဘဲအကျင့်ယိုယွင်းမှုမရှိသည့်အချက်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကငါ့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ဖိအားများများစေပြီး၊ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာစွဲနေတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုဆက်ရှိနေတယ်။ ငါဖောက်ပြန်ဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့မှနိုင်တော့မည်မဟုတ်လော ငါ့ ဦး နှောက်သည်ထာဝရပျက်စီးသွားသလား။
ခဏခဏခဏအိပ်နေတုန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုတွေကိုပြန်ရှင်သန်နေဆဲပါ။ fapping ကိုခုခံတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်အတွေးတွေ။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်မကြာခဏနည်းလာသည်။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာတောက်ပတဲ့အလင်းရောင်။ ဒီတစ်ခါလည်းအဆိုပါလွန်ကျူးပြီးနောက်အားလုံးသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
2 months ago ။ နောက်တဖန်သူမ၏စော။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့လိင်မေတ္တာချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ခဲ့လိုပဲခံစားခဲ့ရရုံ sexing မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ဖွဲ့လုံးကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ကိုတခုတခုအပေါ်မှာမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ခံစားမှု။ ဤအမှုသည်ငါ့စိတ်ကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသတဲ့ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုလိုနိုင်မလား? ငါလျောက်ပတ်သော, သာမန်လူ့ယခုဖြစ်ခြင်းဖြစ်လာသလား
လွန်ခဲ့သော ၂ ပတ်က အကြိမ်ပေါင်းများစွာအတွင်းပိုင်းသို့ရောက်ကြ၏။ ညစ်ပတ်သောစိတ်ကူးယဉ်မှုများသည်ယခုအခါများပြားလာပြီ။ သူမအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်နေသည့်အချိန်၏ ၉၉% သောအချိန်ကာလသည်ငါ့ကိုဟောင်းများကိုပျင်းရိစေပြီးပစ္စည်းအသစ်အတွက်ပြင်းထန်စွာနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါထူးဆန်းတဲ့မကြာခဏပြီးတော့ငါ့စိတ်ထဲသို့တွားသွားပေမယ့်အဲဒါကိုသွားကြဖို့မခေါင်းမာဟောင်းနွမ်းသောအမိန့်များအကြွင်းအကျန်ကဲ့သို့ခံစားရ၏။
ငါညစ်ပတ်နေသောညစ်ပတ်နေသောအရာများကိုစိတ်ကူးတိုင်း၊ ဒါဟာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရှုထောင့်ကနေပိုပါတယ်။ ဘယ်လိုဝေးဒါဝေးလာခဲ့တာလဲ တစ်ချိန်ကဂျပန်လိင်မှုကိစ္စသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝတွင်အဘယ်ကြောင့်အဓိကကျသောလက္ခဏာဖြစ်သနည်း literotica ကိုဒေါသထွက်ဖို့လေယာဉ်ပေါ်ကအိမ်သာတွေကိုငါဘာကြောင့်ဆုတ်ခွာခဲ့တာလဲ။ အင်တာနက်ဖြင့်လောင်ကျွမ်းသောဖောက်ပြန်မှုများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးကမ္ဘာဘဝတွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ကင်းကွာနေခြင်း၏အမှတ်လက္ခဏာတစ်ခုလား။ ငါတို့ကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ရင်ဒီနည်းပညာအားလုံးရဲ့အမှတ်ကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းများကိုဆွေးနွေးရန်နာရီပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုပြချင်သောအရာသည်ထွက်ပေါက်တစ်ခုရှိသေးသည်။ စိုစွတ်သောဒိန်ခဲထက်ပိုမိုပျော့ပြောင်းသည့်စိုက်ထူမှုများမှမဟုတ်ဘဲယိုယွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကူးယဉ်မှုများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းထောင်မှဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မလွယ်ကူပါ၊ အချိန်ယူပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ခြင်းဟာမခက်ဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်။ ထွက်သွားသည်မှာ၎င်းသည်အလွယ်ကူဆုံးအပိုင်းဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်ုပ်လုပ်သမျှအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်လက်များကိုအချို့သောအရာများပြုလုပ်ရန်မလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတွေးများနှင့်ခံစားချက်များကိုရပ်တန့်ရန်ခက်ခဲသည်။
LINK - နီးပါးတစ်နှစ်ငါ၏အတိုးတက်မှုအတွက်။
ကျွန်ုပ်၏ယခင်ခေါင်းစဉ်မှာ NoFap (၃) လအကြောင်းပြောသောအခါကျွန်ုပ်သည်စတင်ရန်အကြောင်းပြချက်များနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးကိုကောင်းမွန်သောနည်းဖြင့်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ရှည်လျားသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ် - စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်နေ့လျှင် ၁-၃ ကြိမ်ခုတ်ထွင်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်၏ချစ်သူနှင့်အတူရှိစဉ်ကျွန်ုပ်၏ဝမ်သည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမဟုတ်ပါ (ဆယ်ကျော်သက်များယခုတိုးတက်လျက်ရှိသောအရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်အတော်လေးယဉ်ပါးနေလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သနည်း။ ) နှစ်ပေါင်းများစွာ NoFap လုပ်ခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့အခြေအနေတွေကအများကြီးပိုကောင်းလာတယ်။
သူမသည်အားလပ်ရက်အနားယူချိန်တွင်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မျှအကြာတွင်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ နွေရာသီရဲ့နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်တွေမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ပြီးလေးလအကြာ။ ဝမ်ဝမ်ကိုငါစိတ်မ ၀ င်စားတော့ဘူး၊ ခွန်အားကြီးတယ်။ ကျွန်ုပ်၌ရှိသောပြsomeနာအချို့မှာ -
သူမမှာကွန်ဒုံးသုံးရန်မကြိုးစားမီ၊ သူမသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းဆေးပြားကိုသောက်နေပြီ၊ ၎င်းသည်သူမအတွက်အလွန်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရာယခုအချိန်တွင်သဘာဝကပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ သူတို့ကိုငါသူမ၏လက်၏အချို့သောအကူအညီများနှင့်အတူလာပါတယ်။ BJs နှင့်အတူတူညီသောအခွအေနေ။ Pussy / BJ fuck ဆိုတဲ့ဟာကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်တကယ်ကိုလုံလောက်တဲ့လှုံ့ဆော်မှုတော့မဟုတ်ဘူး။ တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်သည်မျက်စိပိတ်။ စိတ်ကူးယဉ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ရသော်လည်းအနည်းဆုံး YesFap ကာလများကဲ့သို့စိတ်ကူးစိတ်သန်းများသည်မကောင်းတော့ပေ။
နောက်ဆုံးအချက်နှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုအနည်းငယ် - ငါသူနှင့်အတူရှိနေသောအခါတိုင်းကျွန်ုပ်သည်စူပါ ဦး ချိုကြီးဖြစ်သည်။ အရမ်းချိုသာလွန်းလို့ကျွန်တော်အိပ်ချင်နေပြီးအေးဆေးနေနိုင်သည်ဟုမခံစားရပါ။ ကျွန်မရဲ့ခံစားချက်ကိုတကယ်မခံစားရသည့်တိုင်ကျွန်မရဲ့ဒစ်ကသူမရဲ့လိင်အင်္ဂါထဲဝင်ဖို့ခေါင်းထဲမှာအော်ဟစ်နေတယ်။ အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သောည (သို့မဟုတ်) နာရီဝက်ခန့်ကကျွန်ုပ်လာပါက၊ ငါအမြဲတမ်း cum ကိုမကြိုက်ဘူး၊ Hardon ရုံနဲ့သူညင်ညင်သာသာထိုးလိုက်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်အတူတကွဇွန်းနဲ့ငါ့ဒစ်ကိုသူမရဲ့ခြေထောက်တစ်လျှောက်ကပ်ထားတာကစိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့ကြက်ကငါ့နားထဲကိုအော်ဟစ်နေတယ်၊ အကယ်၍“ FUCKFUCKSEXSEXPUSSYPUSSY” ကဲ့သို့သောဆူညံသံသည် အကယ်၍ ဆူညံနေလျှင်၎င်းသည်အလွန်စိတ်သောကဖြစ်သည်။ ဒါဟာစိတ်ဖိစီးမှုပါပဲ ကျွန်တော့်ငပဲဟာတကယ်တမ်းလိင်ဆက်ဆံချင်စိတ်မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်၊ အဲဒါကနောက်တစ်ခါထပ်ခါထပ်ခါဖြစ်ချင်တယ်။ (လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကညစ်ညမ်းတဲ့ရက်တွေရဲ့ပဲ့တင်ထပ်နေဆဲ၊ စကြဝardာထဲမှာအခက်ခဲဆုံးလိုခေါင်းမာနေဆဲလား?) ငါကဆယ်ကျော်သက်မဟုတ်သေးဘူး၊ အခု ၂၅ နှစ်ရှိပြီ။
ယေဘုယျအားဖြင့်အရာတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ ငါငှက်ပျောသီး၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိတ်မ ၀ င်စားတော့ပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆူညံသံကိုယခုအာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ သူမကိုချစ်ရန်ကျွန်ုပ်၏စွမ်းရည်ကိုလျော့နည်းစေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အားခံစားစေသည်။ ငါတို့မှာအချိန်ကောင်းနေတုန်းပဲ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လိင်အကြောင်းစိတ်ကိုအေးဆေးမထားနိုင်တဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာငါစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။
ကောင်းပါတယ်၊ အနည်းဆုံးတော့သူမသူမကိုကောင်းကောင်းနေနိုင်အောင်အချိန်ကြာမြင့်စွာထားနိုင်သည်။ ငါ (2013 ခုနှစ်ဖြစ်သည့်) ကမိန်းကလေးတစ် ဦး အတွင်းသို့နောက်ဆုံးသောကာလ၌အကြောင်းကို 1 မိနစ်, ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်း၌ကျော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ငါဟာသူမကိုကျေနပ်အောင်လုပ်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်လို့ခံစားရတယ်။ အချို့သောအရာများသည်သင်၏ ဦး ခေါင်း၌ဟန်ချက်ညီစေရန်အချိန်ပိုယူရသည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့အရာအားလုံးအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ခံစားရတယ်။
အားလုံးအတွက်စူပါပါဝါ + အကြံပေးချက်မှတ်ချက် - နို ၀ င်ဘာအစမှာငါအရမ်းငြီးငွေ့လာတယ်၊ ဒါကကျောင်းမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုံလုံလောက်လောက်ရဖို့ငါ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုလျော့နည်းသွားစေတယ်။ တစ်နေ့ ၁၂ နာရီအိပ်နေတယ်။ ငါသွေးစစ်ပြီးပြီ၊ တကယ်တော့ဗီတာမင် D (တကယ်တော့ဗီတာမင်မဟုတ်၊ စတီယာရင်ပိုများတယ်) အဆင့်တွေဟာအရမ်းနည်းတယ်၊ ဆောင်းရာသီရာသီဥတုနဲ့နေရောင်ခြည်သိပ်မရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေအတွက်ကြီးထွားလာတယ်။ အပို Vit D အတွက်ဆေးညွှန်းရရှိပြီး၊ စူပါမားကတ်မှအပို Vit D ဆေးပြားများကို (ဆေးဆိုင်မှဆေးပမာဏထက်များစွာနိမ့်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်နေ့စဉ်အပတ်စဉ်အစားယူနိုင်သည်)၊ ယခုကျွန်ုပ်သည်အားအင်ပြည့်ဝပြီးအားတက်လျက်ရှိသည်။